Gịnị mere ịnyịnya ígwè ji ewu ewu na Holland? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Bikes na holland - otu esi edozi
Bikes na holland - otu esi edozi
Gịnị mere ịnyịnya ígwè ji ewu ewu na Holland?
Mgbe ị na-aga n'okporo ụzọ,Ndị na-agba ịnyịnya ígwè Dutchnwee mmetụta dị ike ma chebe, na-eme ka ahụmịhe ahụ niile bụrụ ihe na-atọ ụtọ. E nwere ihe egwu n'okporo ụzọ, manaukwuọ na-esiri ha ike ịgụnye ngwongwo ngwongwo dị arọ, okporo ụzọ a na-emezighị emezi ma ọ bụ ndị ọkwọ ụgbọala dị egwu.Ọgọst 8 2013
nke a bụ igwe kwụ otu ebe anyị bụ igwe ọkpọka, ọ bụ nnukwu ịnyịnya ígwè, ọ bụ ihe ọ bụla pụrụ iche ọbụlagodi ebe a na mpaghara netherlands mana na canada anyị ma ọ bụ ọtụtụ mba ndị ọzọ igwe kwụ otu ebe a ga-abụ ihe pụrụ iche na igwe kwụ otu ebe dị ka nke a tụrụ m n'anya mgbe m gara. oge izizi na ala netherlands bụ Dutch anyịnya igwe na-hụrụ ka a kwa ụbọchị n'aka iga iji si ebe a na-ezo ọsọ ọsọ na rụọ ọrụ nke ọma. Imirikiti mba ndị ọzọ n'ụwa na-eji ịnyịnya ígwè eme ihe maka egwuregwu na mmega ahụ. Otu ọdịiche ahụ na-akọwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile pụrụ iche banyere igwe kwụ otu ebe dị ka nke a ugbu a, ọ bụghị na nke a bụ naanị ụdị igwe kwụ otu ebe ị nwere.
N'ezie enwere ọtụtụ ndị ọzọ na Netherlands gụnyere E-BikesCargo Bikes Handbikes na ị ga-ahụrịrị ịgba ịnyịnya ígwè ndị a na-ejikwa maka egwuregwu, karịsịa na ngwụsị izu, mana maka obodo kwa ụbọchị na-anya ụdị igwe kwụ otu ebe bụ ihe kachasị. Ya mere, gịnị mere igwe kwụ otu ebe a ji dị iche na ihe ị nwere ike ịbụ? Isi ihe dị iche bụ na nke a bụ igwe kwụ otu ebe e mere ka ọ bụrụ ebe a na-anọdụ ala, nke a bụ ọnọdụ na-adịghị arụ ọrụ nke na-anaghị enyefe ikike kachasị na crank n'oge pedal stroke, ma ọ bụ na-abụghị aerodynamic, mana onye ị na-eche banyere ihe ziri ezi ọnọdụ awade? elu na azụ na-eme ka ọ dị oke mma ịnya ụdị igwe kwụ otu ebe, ị fọrọ nke nta ka ị dọpụta aka na azụ kama itinye ibu na ha. Nke a bụ naanị ụzọ dị mma karị ịnọdụ ala na igwe kwụ otu ebe na imewe ahụ dị ka mbụ nchekwa bike yiri, nke e mepụtara na UK, mbubreyo narị afọ nke 19 ziri ezi nọ ọdụ na-emekwa ka ọ dịrị ya mfe ịhụ ihe na-eme gburugburu gị, nke nwere ike ịdị nchebe mgbe ịgba ígwè na-arụsi ọrụ ike na gburugburu obodo na ọtụtụ ndị ọzọ.
N'ụzọ dị otú a ị nwere ike iyi ụdị uwe ọ bụla ịchọrọ n'ihi na ọ dị iche karịa ịnọdụ ala n'oche Hụ ọtụtụ ndị nọ na Netherlands yi uwe maka njem ion na enweghị ịnya ịnyịnya ígwè a ụzọ ụkwụ gafere nke pụtara na ọ bụ dị mfe ịbanye na apụ apụ n’ịgwagharị ụkwụ gị dị ka igwe kwụ otu ebe dị ka nke a na ogwe osisi Ogwe osisi ndị a dị mma na ị ga-ahụ ha ebe a, mana a na m ahụ ha iwe ọ kachasị ma ọ bụrụ na ịnwere oche akids n’ihi na mgbe ị na-efegharị ụkwụ gị ịzọ ụkwụ gị ịkụ nwa gị isi n'isi ma aghọtaghị m ihe kpatara na anyị ka na-akpọ igwe kwụ otu ebe ndị a mgbe ọ bụ naanị ụzọ ị ga - esi merie onwe gị n'ihi na usoro ị ga - eji na - adaba adaba iji jiri na - ewu ewu Nke a bụ otu ihe ọzọ na - enyere ndị mmadụ aka iyi uwe dị mma mgbe ha na - agba ịnyịnya na ihe kpatara ị ga - ahụ ụmụ nwanyị na - eyi uwe na sketị. N'ikwu okwu banyere uwe mwụda, a na-akpọ ihe a uwe nchekwa ma ọ bụ ihe nchebe uwe ma ọ bụ ihe a na-ahụkarị na ịnyịnya ígwè ndị Dutch. Nkwupụta dịka echiche gị na-enye aka igbochi nwatakịrị nọ ọdụ n'azụ ha ka ụkwụ ha guzosie ike iji chebe uwe gị, ihe nchekwa agbụ bụ plastic - ma ọ bụ ihe mkpuchi igwe n'elu igwe kwụ otu ebe na-enye aka ichebe agbụ ahụ site na ihe ndị na-eme ya ma mee ka ọ dịrị ogologo oge - ihe a na-akpọ osisi log na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na igwe kwụ otu ebe na Netherlands nwere otu - ndị a bara uru nke ukwuu maka ọtụtụ ihe , ma ọ fọrọ nke nta ka m ghara inwe ha na mpụga netherlands hụrụ na japan ha bụ ụzọ dị mfe iji kpọchie ụkwụ azụ nke igwe kwụ otu ebe maka nkwụsị ọsọ ọsọ nke na-eme ka ọ dị mfe ịbanye n'ime ụlọ ahịa ma ọ bụrụ na ị na-anya ụgbọ ala ebe ọ bụla mkpọchi ahụ mekwara. gị isi na etiti i nwere ike mgbe na-agba ịnyịnya n'ezie ịzụta etiti akpọchi na-adịghị, ma m na-adịghị amasị n'ezie isi njigide atụmatụ na nke ahụ bụ a obere zuru ezu ma ọ ana achi achi gị igwe igodo gị mgbe niile na-na gị, ọ bụ ezie na m na a kno wn maka ịgbanye igodo m na mberede wee gbanye ya otu a, oops ọ bụrụgodi na ọ dị ọtụtụ akpọchi mkpọchi, ịnweghị ike ịnya ịnyịnya ígwè ahụ, mana n'ezie ị nwere ike iburu ya ma soro ya jee ije.
Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ijide n'aka na igwe kwụ otu ebe gị ka dị mgbe ị laghachitere, ihe kachasị mma ị ga-eme bụ ịkpọrọ gị na agbụ ígwè, ọtụtụ mmadụ na-emekwa, ịhụ igwe ekpochi n'ụzọ ahụ nwere ike ịbụ n'ihi na onye nwe igwe kwụ otu ebe shitty ha kwụsịrị ịkwụsị ya. A obere mgbanwe nke a bụ a etiti mkpọchi na integrated yinye mkpọchi na-enye gị ihe mkpọchi abụọ na otu isi. N'ụzọ na-akpali mmasị, a na-ejighị mkpọchi emechi mkpọchi ndị dị na North America ọtụtụ mgbe na mgbe ahụ n'ihi na ọ nwere ọtụtụ igwe kwụ otu ebe ọ na-esiri ike ịbịaru nso na ihe ị ga-agbachi.
Akụkụ ọzọ nke ị ga-ahụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ igwe kwụ otu ebe na Netherlands bụ ma ihu na azụ azụ. Nke a bụ ihe ezi uche dị na mba ebe mmiri na-ezo oge niile. A naghị ele ndị nche anya dị ka mgbakwunye nhọrọ, ihe so na ya bụ kickstand, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ igwe kwụ otu ebe na-abịa na mgbochi nke ị na-ahụkarị na akpa akpa. , ụfọdụ anyịnya igwe nwere n'ihu onye na-ebu ibu.
Na mmechi, igwe kwụ otu ebe a ka ọ bara uru. Yabụ ọ bụrụ na ị nwere panniers na azụ ma ọ bụ igbe dị n'ihu, ịnwere ike iburu ọtụtụ ihe ijuanya. Ọ dịghị SUV chọrọ akpa ibu na Netherlands dịkwa ike iburu onye ọzọ ị na-ahụ mara mma mgbe niile, mana mgbe ahụ ihe niile gbasara igwe kwụ otu ebe bụ ike Hub gears dị ka ihe ndị a na-hub hub dị ukwuu n'ihi na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị ọrụ.
Nke a dị ezigbo iche na ndị na-ewepu ego, nke n'echiche m na-apụ mgbe niile. Enweghị m breeki aka ma, ọtụtụ ịnyịnya ígwè ebe a nwere breeki aka ma nke a na-eji ihe mkpuchi ala nke ị na-eme site na ntụgharị nke na-atọ m ụtọ n'ihi na na Canada ị gaghị ahụ ụdị brek dị otu a belụsọ na ụmụaka ụmụaka ha nwetara ọ dịkarịrị m mkpa, mana m na-ahọrọ ịnyagharị n'ụzọ ahụ n'ihi na ọ na-adị ka ihe dị adị iji gaa n'ihu iji mee ngwangwa na ịpịghachi azụ na breeki na-enweghị aka breeki ma ọ bụ Gearsit na-eme ka igwe kwụ otu ebe dị mfe ma nwekwaa onwe ya ọ na-egbochi eriri na mberede ka ejidere na igwe ndị ọzọ mgbe ị na-adọba ụgbọala na oghere siri ike. A na-eme ihe a niile iji mee ka igwe kwụ otu ebe na-arụ ọrụ nke ọma, nke dị mkpa mgbe ọ bụ ụdị njem njem gị naanị nsogbu anyị nwere na igwe kwụ otu ebe a bụ taya na-ada oge ụfọdụ na-ekwu okwu banyere taya, ị maara na ha bụ ebe a na USA na Canada na-eji valvụ taya dị iche, e nwere naanị valvụ taya abụọ na Presta na-agba ịnyịnya ígwè na Schrader na ihe ọ bụla ọzọ ebe a na Netherlands, ha na-eji valvụ ọkụ, valvụ ndị a nwere obere bọl na-egbochi ikuku ịgbapụ . na ị na-achọ ịmata ihe, ị nwere ike iji mgbapụta Presta na-emejupụta ya oge niile, naanị kpoo ya na nrụgide dị elu ma valvụ ahụ ga-emeghe na-akpaghị aka.
Ihe ọzọ ị ga - ahụ mgbe ụfọdụ na igwe kwụ otu ebe ebe a bụ dynamo nke na - aga na wiil ma ọ bụ na wiilị ma na - ewepụta ikike zuru oke iji mee ka ọkụ ọkụ ọkụ. Ndị a dị mma nke ọma dịka ịgaghị echegbu onwe gị maka ịdeghachi batrị ma ọ bụ chefuo ọkụ gị. Naanị otu obere ihe na-eme ka igwe kwụ otu ebe a dị mfe maka iji ya kwa ụbọchị yana n'ikpeazụ mgbịrịgba na igwe kwụ otu ebe a na-eme ka ọ dị mma ọ bụ ezie na ọ gaghị esiri gị ike iji mgbịrịgba gị ebe a. N'agbanyeghị na anyị bi na Kanada anyị maara banyere igwe kwụ ọtọ Dutch ma gbalịa Foto a chịkọtara ọnọdụ dị na Canada nhọrọ ịnyịnya ígwè nke a na-ekwu na ọ bụ naanị ngwakọ egwuregwu na egwuregwu ịgba ọsọ na-agba ọsọ, ha anaghịdị eji ihe eji ebu ma ọ bụ ihe egwuregwu, enwere ike ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe nwere igwe kwụ otu ebe na ehihie mana mgbe anyị bi na Toronto, ọ bụ naanị otu ụlọ ahịa na-ere ha, nke kacha nso dị ihe karịrị kilomita 50 site na Amsterdam ebe a, enweghị m ike ịmegharị mkpọchi na-enweghị nzute ụlọ ahịa igwe iri na abụọ na-ere igwe kwụ ọtọ. maka njem, ọ nweghị otu na Winnipeg, Canada? wee nwee nkụda mmụọ n'ịchọta igwe kwụ otu ebe bara uru nke na ha malitere ibubata igwe kwụ otu ebe na Netherlands.
Ha na-akpọ onwe ha icygbọala Igwe Igwe ụgbọ elu na ha na-enwetakwa mbadamba mbupu jupụtara na ịnyịnya ígwè si Netherlands na-enwe oke ịnwe ịnyịnya ígwè nke na-abụghị maka igwe kwụ otu ebe, ọrụ bụ isi bụ ịnọ ebe ahụ mgbe ịchọrọ ya iji zụọ ahịa gị ma ọ bụ gị enyi na-eburu ma jiri ya mee obere mgbalị dịka o kwere omume enweghị akụrụngwa pụrụ iche ma ọ bụ mgbanwe ejiji chọrọ ka a na-elegharakarị nke a anya n'ihi na o doro anya na ọ dị mkpa ịnweta ụzọ dị mfe iji rụọ ọrụ, obere ịnyịnya ígwè dị ka nke a iji nwee okporo ụzọ dị mma na ịgba ígwè . Ebi m na Amsterdam. Amaara m na igwe igwe igwe na-abụkarị ọsọ ọsọ, ụzọ kachasị mma iji ruo ebe ahụ, mana ọ dịkwa mkpa ịmara na m merie, enweghịkwa m nsogbu na ochie ochie anyị nke jupụtara nro, nke nwere ntụsara ahụ, nke nne nne m nwere ntụkwasị obi, achọrọ m ka m kelee m fansonon patreon onye kwụrụ m ka m kwuo maka justbikes na ọ bụghị naanị igwe kwụ otu ebe ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwado ọwa a ma nweta akwụkwọ edemede ego na visitpatreon.com ọ bụghị naanị igwe kwụ otu ebe
Ego ole ka anyịnya igwe na-eri na Netherlands?
Ọhụrụanyịnya igweabụghịọnụ ala, na nkeziọnụahịanke ihe dị ka € 600. A ọma-n'akaigwe kwụ otu ebenwere ike mfeego100 € 250 - maka ọnụ alaanyịnya igwenwaa ahịa na Waterlooplein. Enwere ike ịzụta mkpọchi siri ike na ahịa Waterlooplein ma ọ bụ Albert Cuyp.Asụsụ Dutchụlọ ahịa ngalaba HEMA na-erekwa ansonke isi agba ịnyịnya ígwè.Febbọchị 10 2020
Kedu igwe ọgba tum tum na-eme na Holland?
Nke a bụ ndepụta nke kacha mmaIgwe DutchEcheta:
Site na Nicholas.
Edere anyịnya igwe na Holland?
Re:Igwe kwụ otu ebeikike /ndebanye ahan'imeNetherlands
Ndị Dutchndebanye aha/ A kwụsịrị atụmatụ ụtụ na 1942.Ọgọst 23 2013
(upbeat remixed music) - Ọfọn ebe a na Verge anyị hụrụ electric rideables. Hoverboards, skateboard, scooters, ọgba tum tum, mopeds, ịnyịnya ígwè, atọ igwe atọ, ihe ọ bụla, anyị na-agba ha. Mana m bịara ịgwa gị ihe kpatara m ji chee na igwe eletrik eletrik karịrị naanị ihe ọgbara ọhụrụ ọgbara ọhụrụ.
Echere m na ha nwere ike ịbụ ọdịnihu nke njem. Ma nke ahụ pụtara na enwere ọtụtụ ihe n’ebe ahụ na ịchọghị ka a ghọgbuo gị gbasara e-anyịnya igwe. O doro anya na e-anyịnya igwe abụghị ihe ọhụrụ.
Ha anọwo na-gburugburu ruo ọtụtụ iri afọ. Dịka ọmụmaatụ, na Europe, e-igwe kwụ otu ebe enyerela ndị toro eto aka ịnagide nnwere onwe ha ma gbawaa ndị na-eto eto karịchara. .
Ma, ebe a na US, e-anyịnya igwe ka bụ a niche. Naanị ha na-eme 4% nke ngụkọta ego site na ire ere igwe. Tụlee nke ahụ na mba ndị nwere enyi igwe kwụ otu ebe dị ka Netherlands, ebe a na-ere ọtụtụ igwe eletrik karịa igwe kwụ otu ebe.
Na mkpokọta, ndị ọkachamara na-ebu amụma na ahịa zuru ụwa ọnụ ga-erute ijeri US $ 23.8 na 2025. Mana ndị America ji nwayọ na-agagharị.
Ọrịre igwe eletriki igwe eletrik na US amụbaala karịa okpukpu asatọ kemgbe 2014. Ọ were ogologo oge iji ruo ebe ahụ na ikike izizi mbụ na igwe eletriki eletrik gbara akwụkwọ na 1895 site n'aka onye nrụpụta aha ya bụ Ogden Bolton. Bolton emeghị n'ezie ma ọ bụ ree nke igwe kwụ otu ebe ya, mana ọ bụ ihe ịtụnanya na enwere ike ịchọta ụfọdụ nkọwa nkọwa na e-igwe taa.
A azụ ehiwe moto na a batrị n'ịnyịnya centrally na etiti. Ugbu a ka m matara ihe ị na-eche. Kedu mmụọ ọ na-ekwu? A moto ehiwe azụ, amps na volts.
Achọghị m ịdị ngwa. Ya mere, ka anyị kwuo ihe ndị bụ isi tupu anyị amaba n'ime ihe kpatara eji e-igwe bụ ọdịnihu nke njem. (upbeat dance music) Ya mere, n'ozuzu, e-igwe kwụ otu ebe bụ igwe kwụ otu ebe na batrị na-enyere aka batrị nke na-abịa mgbe ị na-aga ma ọ bụ na ụfọdụ ụkwụ na-eme ka obere moto na-enye gị mmụba mgbe ị na-arịgo ma ọ bụ gafee ugwu Na-agbagharị ebe dị egwu, ịkwesighi ịrụ ọrụ ọsụsọ.
Tụgharị trotul na-eme otu ihe ahụ, mana na-enweghị pedal. E nwere ụdị injinị abụọ. E nwere etiti mbanye, nke na-adịkarị n'etiti igwe kwụ otu ebe n'etiti pedal abụọ ahụ.
esi wụnye a dropper post
Ma mgbe ahụ, enwere moto ụgbọ ala, nke dị n'etiti etiti ma ọ bụ ụkwụ azụ. Typesdị injin abụọ ahụ nwere uru na ọghọm, dị ọnụ ala karịa ma nwekwaa ọtụtụ. Ha bụ ezigbo ezigbo motọ maka onye ọ bụla chọrọ e-bike a pụrụ ịtụkwasị obi maka ogologo oge, nke ka ukwuu na-agagharị.
Center draịva na-adịkarị obere, Mkpa ọkụ na ike inye ndị ọzọ torque karịa ehiwe draịva, na-eme ha mma maka ugwu ugwu teren na anya-ụzọ ojiji. Ọnọdụ etiti gị na igwe kwụ otu ebe na-emekwa ka njem dị mma. Na-agbanwe agbanwe na taya na a ọkara mbanye igwe kwụ otu ebe bụ mgbe obere ihe mgbu.
E-igwe kwụ otu ebe na-ejikwa ụdị ihe mmetụta dị iche iche iji chọpụta ụzọ kachasị mma isi kesaa ike. E nwere ụdị abụọ, ọnụọgụ igwe na ike sensọ. Torque sensọ mezie moto dabere na otú ike ị pedal, mgbe cadence sensọ na-adabere na otú ngwa ngwa ị pedal.
Ezigbo igwe kwụ otu ebe na-eji ihe mmetụta igwe eletrik eme ihe, ebe ndị na-ejedebe ala nwere naanị ike na ọtụtụ igwe kwụ otu ebe na-eji ha abụọ, ana m atụ aro ịnwale ụdị motọ abụọ ahụ tupu ịzụrụ e-igwe kwụ otu ebe iji hụ nke kachasị mma maka gị. Chee echiche otu I si eme atụmatụ iji igwe kwụ otu ebe; na-agagharị, na-aga n'okporo ụzọ, na-agagharị agagharị? Edị e-bike kachasị mma na-ejikọkarị ntinye igwe kwesịrị ekwesị na ụdị igwe ha na-ere. Ọtụtụ igwe kwụ otu ebe nwere igwe dị n'etiti, ebe imirikiti igwe kwụ otu ebe na-ere na Amsterdam dị elu bụ ndị na-adabere na ya. Ha hụrụ m ka m na-agbagharị ♪♪ Ha kpọrọ asị ♪♪ Gbalịa ijide m ka m na-agba unyi ♪ (egwu dị egwu- Music) Ugbu a, ka anyị kwuo maka ike.
Maka ebumnuche dị iche iche, ndị nrụpụta na-enyekarị ikike maka ikike karịrị 250 watts. Ma ugbu a kọntinent ahụ na-ekwe ka ere igwe ndị nwere injin dị ike karị, nke dị mma ka enwere ike ịhụ igwe dị ka ụzọ ọzọ dị mma karịa ụgbọ ala, leghara ha anya. Iji nweta a mma echiche banyere otú max ike ị ga-eche n'ezie, chọpụta na ha depụtara volts na amps.
Mee otutu mmadu abuo ka ichota oge watt, ma obu otutu watts nke apuru inyefe n’ime otu awa. Nke a na - enye gị ezigbo echiche banyere oke ole ị na - enweta. Dịka ọmụmaatụ, nnukwu ụgbọ ịnyịnya ígwè si Rad Power Bikes, RadWagon, nwere batrị nke nwere 48 volts na awa 14 ampere. Oge 48 dị oge elekere 672.
Ọ bụrụ na ị na-echefu ike oriri gị, kilomita ọ bụla ị na-eme njem ga-efu gị ihe dị ka awa 20-watt. Yabụ, na ngwungwu elekere elekere 672, ị ga-enweta ihe dịka 54 kilomita. (ọkụ eletrik) ọkụ, ka anyị kwuo maka klaasị.
E nwere klas e-ịnyịnya atọ na klas US nke otu bụ enyemaka pedal na-enweghị ihe mgbochi. Klas nke abụọ na-akụda ma jiri ọsọ ọsọ nke 32 mph. Na klas nke atọ enwere naanị enyemaka ụkwụ, enweghị gas, mana ọsọ ọsọ nke 45 kilomita kwa elekere.
nyocha salsa warbird
Enwere klasị abụọ na Europe; klas otu, nke kachasị dị ewu ewu, nwere ọsọ kachasị na kilomita 25 kwa elekere na-enweghị okpu agha. Klas nke abụọ bụ 1,000 watts gbakwunyere moto nwere ike ịga njem kilomita iri anọ na ise kwa elekere, chọọ okpu agha ma enweghị ike ịgafe n'okporo ụzọ okirikiri. Ha bụ ọgba tum tum, ebe ịzụta e-igwe? Ọ dị mma, ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe gị bụ nzọ kachasị mma gị, ị nwere nhọrọ nke ndị nwe ya lekọtara ma ndị na-arụ ọrụ ebe ahụ ga-aza azịza maka ajụjụ gị niile na-agba ọkụ.
Amazon bụ ebe dị iche, n'ezie, mana enwere ụfọdụ azụmaahịa mara mma ị ga-atụle. Gị igwe kwụ otu ebe nwere ike na-abata mara mma gbajiri. Companieslọ ọrụ ndị na-ere e-igwe kwụ otu ebe na Amazon bụ obere oge, ebe a otu ụbọchị, gafere ụbọchị na-esote.
N'ezie, ọ bụghị naanị Amazon. Imirikiti e-igwe kwụ otu ebe na-ere na US bụ naanị site na akụkụ ọkọlọtọ emere na China nke ị nwere ike ịchọta na katalọgụ ahụ. Ma ọ bụrụ na nke ahụ dị mfe, ọ bụ n’ihi na ọ bụ.
Ọ na-enyere aka ịkọwa ihe kpatara ọtụtụ ijeri ụlọ ọrụ igwe kwụ otu ebe na Kickstarter na Indiegogoting na-anwa ime ka ị nwee mmasị na atụmatụ ha na-adọta anya na teknụzụ ọdịnihu. Ọtụtụ enweghị akwụkwọ ikike ma ọ bụ akara nkwado ndị ahịa. Mgbe ịchọtara igwe ele e-igwe masịrị gị, nnwale na-adọrọ mmasị bụ ịchọ nkọwapụta Alibaba bike iji hụ ma a na-ere ihe yiri ya na Eshia; o nwedịrị ike ịdị ọnụ ala karịa Dị mma, yabụ, m kwere nkwa ịkọwa ihe kpatara m ji chee e-igwe kwụ otu ebe bụ ọdịnihu nke njem.
Ya mere, ka anyị pụọ. Nke mbụ, ọ na - ewetu ihe mgbochi n’ịgba ịnyịnya. Yabụ mgbe ị mere agadi ma ọ bụ nwee nrụgide nke ịgba ịnyịnya ígwè, ihe mgbochi ahụ na-agbadata n'ezie ma ọ dị mfe ịkwado ịnya ịnyịnya ígwè na ịnya ịnyịnya, o yikarịrị ka ị ga-esi n'ụgbọala gị pụọ ma ọ bụ hichapụ ngwa Uber gị Ha ma na ị ga-erute ebe ị na-aga n’ebughi ọsụsọ ma ọ bụ nrụgide.
Ma ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị banyere igwe eletrik eletrik na-ewepụ ihe ọchị niile nke ịnya igwe, ọ ga-abụrịrị ihe na-ezighi ezi. Nnyocha nke mmetụta uche na nke mmụọ nke ịgba ígwè n'èzí hụrụ otu ihe ahụ maka e-igwe na igwe kwụ otu ebe. Ka anyị kwuo na mgbanwe ihu igwe mere ka ị daa.
Igwe igwe eletrik na-adigide karịa ụgbọ ala eletrik, na-eme ka obodo anyị dị ndụ, ha ga-enyere aka ikpochapụ mgbochi okporo ụzọ. Dị ka obodo anyị na-abawanye, ụfọdụ ụlọ ọrụ na-echigharịkwuru igwe eletriki iji mepụta nnyefe ha. Domino's Pizza kwupụtara na nso nso a na ha ga-eji Rad Power Bikes mee ka ndị na-enye Pizza n'obodo ụfọdụ.
UPS na-eji igwe eji ebu eletriki. DPlọ ọrụ na-enyefe ihe na German DPD ga-eji obere gwongworo ndị a mara mma, nke bụ igwe e-igwe. E-anyịnya igwe na-agbanwe ụzọ azụmaahịa si arụ ọrụ. (egwu na-ewuli elu) Ya mere, ụbọchị nke ọzọ, m nọ n’elu igwe e-bike rụọ ọrụ na ihe dị ịtụnanya mere.
Ọfọn, nke mbụ, egbughị m, nke bụ obere ọrụ ebube n'obodo na-egbu ndị na-agba ígwè dị ka New York, mana nke kachasị mkpa bụ na m rutere n'ọfịs ahụ ngwa ngwa, karịa karịa ma m were ụzọ ụgbọ oloko, na abụghị m onye ọsụsọ, nrụgide nrụgide mgbe mbụ m ruru ebe ahụ. Nke a bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ e-igwe eletriki e-eji na-echekwa ụlọ ahịa, ọ na-echekwa m banyere ebe United States n'azụ ụwa ndị ọzọ n'usoro igwe kwụ otu ebe. Anyị na-ahụta ha dịka ntụrụndụ karịa otu ụzọ ụgbọ njem.
Ihe enwere ike iji mee ihe na ihu igwe dị mma ma ọ bụghị na mmiri ozuzo na snow, ndị Dutch nwere ike. Mana bia, otu ụmụnwaanyị anyị nke US ka meriri ha n'iko mba ụwa. Anyị nwekwara ike ịsọ mpi na sadulu ahụ.
Ezubere okporo ụzọ anyị maka ụgbọ ala na ndị ji ụkwụ aga na ndị ịnyịnya ígwè bụ naanị obere okwu. Mana e-bike nwere ike imeghe ụwa niile, ọkachasị maka ndị nwere nka dị iche iche. Lee anya, ha agaghị edozi ihe niile, mana enwere m ike ịkwenye na ozugbo ị malitere ịnya, ị gaghị achọ ịkwụsị.
Anyị ji okwu ahụ bịa? Nke ahụ ọ bụ ezigbo okwu, na-adọrọ adọrọ? Ọ dị ka nri ehihie, mana ị na-anya ya. (ọchị) Kedu ihe ị na-eme bụ ihe ahụ? (Engine hums) - Ikekwe ọ ga-adị ọsọ ọsọ.
Kedu mba na-eji igwe eme ihe ọtụtụ?
Netherlands na-edekọ ihe ndekọ dị kambanaọtụtụ ịnyịnya ígwèkwa n'isi n'isi. Ndị na-agba ịnyịnya ígwè jupụtakwara na Norway, Sweden, Germany, na Denmark.5bọchị 5 2015
Gịnị mere ndị mmadụ ji agba ịnyịnya ígwè na Netherlands?
Ngwa igwe kwụ otu ebe n'imeNetherlandsa na-eche nke ọma na ihe mberede ịgba ígwè bụ ihe ijuanya dị ala, tụmadị olendị mmadụ igwe kwụ otu ebe. Sistemụ pụrụ iche na-eme ka udo dị n'okporo ụzọ na-echekwa ụzọ dị mma maka okporo ụzọ nwere ụkwụ abụọ, na-ebelata ihe ize ndụ nke ihe ọghọm dị egwu.
Gịnị mere igwe igwe Dutch ji dị oke ọnụ?
ỌtụtụDutch anyịnya igwe, n'ihi iwu ma ọ bụ omenala obodo, ga-abịa na ọkụ, taya na-eche echiche, mgbịrịgba, ngosiputa azụ, akwa na-agba ọsọ, fenders / mudguards na onye na-ebu panier, nke na-agbakwunye ụgwọ.
Ndi igwe igwe Dutch di nma?
Dutch anyịnya igwebụ aeziNhọrọ ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụta aka nke abụọ, naanị na-eme ka ọ bụrụ na gia na breeki dịeziọnọdụ. Ozugbo ị nwere igwe kwụ otu ebe gị, mmezi agaghị akwụ gị nnukwu ụgwọ n'ihi atụmatụ siri ike nke igwe kwụ otu ebe. g.
Kedu igwe igwe kachasị ewu ewu na Netherlands?
Naigwe egwu kacha ewu ewuna Amsterdam site na obodo mile bụ Swapfiets. Dị na 3 dị iche iche ụdị ma otu ọsọ version na ha mbinye aka-acha anụnụ anụnụ n'ihu taya bụ ya merenkịtịna ha na-amalite ịmalite ụyọkọ.22 mba. Dec 2019
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè nwere ụzọ ziri ezi na Holland?
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè enweelaihenke ziri ezina mkpokọtaNetherlands. Ọ bụrụ na enwere obi abụọ, mgbe enwere ndị ji ụkwụ aga, ụgbọ ala na igwe kwụ otu ebe, ịnyịnya ígwè mgbe niilenweemkpa n'agbanyeghị ọnọdụ, site n'iwu. Ọzọkwa, a kwadebere n'okporo ámá na ịgafe ma a na-etinye igwe anyịnya igwe n'ime atụmatụ okporo ụzọ.Eprel 7 2020
Ndị Dutch na-akwụ ụtụ isi ịnyịnya ígwè?
Dị ka ihe niileAsụsụ Dutchụmụ amaala, ndị na-agba ígwèkwuo ugwoego mbatataxna ụtụ isi obodo. A na-eji ụzọ ndị a enweta ego iji kpuchie ụdị ụgwọ niile, gụnyere akụrụngwa ọha na eze.